Best Beginner ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်နှင့်ညှပ် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် သြဂုတ်လ 31, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 9
အွန်လိုင်းတွင်ဆံပင်ကတ်ကြေးနှင့်ညှပ်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်၊ အစပြုသူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်များအတွက်မည်သည့်တွဲသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
အကောင်းဆုံးအစပြုသူကတ်ကြေး ၈ ခု
အိမ်တွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်မည်သူမဆိုအတွက်သင့်တော်သောထိပ်တန်း ၈ ဦး ဆံပင်ညှပ်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Mina Umi ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်
ပြားချပ်ချပ် Edge Blade ကို
Mina Matte အနက်ရောင် Set
Matte က Black Coating
Key ကို Adjustable တင်းမာမှု
Ichiro Ergo ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ထားသည်
၀ င်ငွေ၊ ကျောင်းသားနှင့်အလုပ်သင်ကတ်ကြေး ၀ ယ်ရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ ၃
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုကြည့်သောအခါ၎င်းသည်အတော်လေးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သင်များ၊ အိမ်မှဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်သူများအတွက်အစပြုသူဆံပင်ကတ်ကြေးကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုအကြံဥာဏ်များကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အရွယ်အစားအများစုသည် ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးသင်ကြည့်နေသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းကိုပင်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
ဒါတွေကိုလိုက်နာပါ ဆံပင်ကတ်ကြေး၏အရွယ်အစားကိုရှာဖွေရန်ခြေလှမ်းများ မင်းအတွက်:
အစပြုသူ၊ ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အလုပ်သင်များကကျွန်ုပ်တို့အားအရွယ်အစားအကြောင်းမေးသောအခါအီးမေးလ်ပို့သောအခါ ၆ လက်မအရွယ်အစားကိုလူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအများဆုံးရောင်းချသည့်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
2 ။ အဆိုပါ ဆံပင်ကတ်ကြေးအမျိုးအစားများ
၀ ယ်သူများကိုမ ၀ ယ်ခင်ကြည့်ရှုသင့်သည့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးအမျိုးအစားအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အစပြုသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်သင်များအတွက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားမှာ Short Blade (၅.၅ မှ ၆ အထိ) ညှပ်ဖြစ်သည်။
တိုတောင်းသောဓါးသွားနှင့်အတူဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအရွယ်အစားအကြားရှိပါတယ်;5"လက်မနှင့် 6" လက်မ။
တိုတောင်းသောဓါးသွားကတ်ကြေးများသည်သင်လိုအပ်သည့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်တိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဆံပင်ကတ်ကြေးသည် ၅.၅ လက်မ (သို့) ၆ လက်မအရွယ်ရှိသည်။
သငျသညျဆံပင်ညှပ်နည်းစနစ်များစတင်လေ့လာသင်ယူနေလျှင်ရှည်လျားသောဓါး 6.5 "သို့မဟုတ် 7" အရွယ်အစားသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အစပြုသူများသည်“ over the comb” နည်းစနစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်ပြီးရှည်သောဓါးဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Texturising and Thinning ကတ်ကြေးသည်ဆံပင်ထူထူအတွက်အရေးကြီးသည်။ ပါးလွှာသောကတ်ကြေးအနည်းငယ်မျှသောလှုပ်ရှားမှုကသင့်အားထူသောဆံပင်ကိုပါးလွှာစေနိုင်သည်။
အစပြုသူများအနေဖြင့်အံသွား ၃၀ မှ ၄၀ အထိနှင့်အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မသို့မဟုတ် ၆ လက်မရှိသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးသို့မဟုတ် texturizing shear များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အရင်ကဆိုရင်ဆံပင်ညှပ်လက်ကိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဆံပင်အလှပြင်သူတွေနဲ့ဆံပင်ညှပ်သူတွေအတွက်ရိုးရာအစဉ်အလာ (သို့) အော့ဖ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
offset လက်ကိုင်သည်သင်၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုသဘာဝအနေအထားတွင် ထား၍ strain ကိုလျှော့ချသည်။ သင်ဟာအစပြုသူနှင့်အလုပ်သင်ဆံပင်ညှပ်သူတိုင်းနီးပါးဟာ offset လက်ကိုင်ကိုသုံးတတ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ဆံပင်ညှပ်ရန်အလုံခြုံဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအရအဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာပြီးဆန့်ကျင်ဖက်ဂန္ထဝင် (အောက်တွင်) လက်ကိုင်သည်နည်းစနစ်ဟောင်းများနှင့်ရိုးရှင်းသောကတ်ကြေးဒီဇိုင်းများနှင့် ပို၍ ရေပန်းစားသည်။
အဆိုပါဂန္ထဝင်ရိုးရာသို့မဟုတ်အချိုးကျဆံပင်ကတ်ကြေးလက်ကိုင်အဘယ်သူမျှမ offset နှင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကိုရှိသည်။
ဤရွေ့ကားသင်ရုံကောက်နှင့်ဖြတ်တောက်နိုင်မကတ်ကြေးများအတွက်လူကြိုက်များကြသည်။ ဤလက်ကိုင်တွင် ergonomic ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများမပါပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နာရီပေါင်းများစွာဖြတ်တောက်ပါကသတိထားပါ။
အဆိုပါကရန်းကတ်ကြေးကလက်ကိုင်အပေါ်ပိုမိုအားကောင်း offset ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအများဆုံး ergonomic ဖြစ်ကြသည်။ အဆင့်မြင့် ergonomics ပါသောကတ်ကြေးတစ်စုံကိုရှာဖွေနေသောပညာရှင်များအတွက်သင်က crane လက်ကိုင်ဖြင့်စတင်ခဲ့သောကန ဦး ကတ်ကြေးများစွာကိုရှာမတွေ့ပါ။
လက်ဝဲလက်ကိုင်အစပြုသူ၊ ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အလုပ်သင်ဆံပင်ညှပ်သမားများအတွက်သင်က offset သို့မဟုတ်ရိုးရာလက်ကိုင်နှင့်မည်သည့် lefty စုံကိုမဆို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကွာခြားချက်မှာထောင့်များနှင့်စတင်သူများအတွက်လက်ဝဲကတ်ကြေးများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက်တွဲဖော်အသစ်ရှာနေသူတစ် ဦး၊ ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အလုပ်သင်တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်မှာ ၆ လက်မအရွယ်အစား၊ အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်လွယ်ကူသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်အတွက်ဓါးတိုတိုဖြစ်သည်။
1. Mina Timeless ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်း
လူကြိုက်အများဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကိုတတ်နိုင်သောဈေးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ The Mina ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊
ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအရွယ်အစား၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းစနစ်များနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသော offgonomics များနှင့်လိုက်ဖက်သော rounders အားလုံးပြီးပြည့်စုံသည်။
✔️ ပြားချပ်ချပ် Edge Blade ကို
❌ တ ဦး တည်းအရောင်ကန့်သတ်
3. Mina Umi ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်
အဆိုပါ Mina Umi ဆံပင်ကတ်ကြေးသည်ဂျပန်ကတ်ကြေးရောင်းချမှုအများဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၊ ပညာရှင်ဆန်သောဓါး၊ offset ergonomics နှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း။
ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်တာကိုအကောင်းဆုံးအနေဖြင့်သင်ရှာလိုလျှင်၊ Umi အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားနှင့်ဖြတ်ကျော်လာမှုသည်ပညာရှင်များနှင့်အိမ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
❌ နေ့စဉ်သုံးပါက ပိုမို၍ ထက်မြက်စေနိုင်သည်
Mina Umi ကပျကြေး
4. Mina Matte က Black ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်း
လူကြိုက်အများဆုံးအနက်ရောင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ဤရွေ့ကား Mina Matte Black ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်းသည် offset ပုံစံ၊ ချွန်ထက်သောဓါးများနှင့်ဆံပင်ပုံစံနှင့်ဖြတ်ခြင်းနည်းပညာတိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။
✔️ Matte အနက်ရောင်ဒီဇိုင်း
✔️ Sharp ကခုံး Edge ဓါးသွား
✔️ ဂရိတ် Value ကို!
Mina Matte က Black ကတ်ကြေး
5. Ichiro Ergo Scissor အစုံ
အဆိုပါ Ichiro Ergo မော်ဒယ်များသည် offset ergonomic ဒီဇိုင်း၊ ချွန်ထက်သောချွန်ထက်သောအနားများနှင့်ချောသောချောချောချောမွေ့မွေ့ပြီးပါပြီ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အစပြုသူနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောအကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးဝင်ပေါက်အဆင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးကပ်လွယ်ကူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
✔️ Micro- Serrated ဓါးသွား
✔️ ပေါ့ပါး Ergonomic ဒီဇိုင်း
✔️ ပွတ် finish ကို
Ichiro Ergo သတ်မှတ်ချက်
6. Mina ဆံညှပ်
အစပြုသူတစ် ဦး အတွက်ဆံညှပ်ညှပ်ဝယ်ချင်ပါသလား။ The Mina ဘာဘာကတ်ကြေးသည်ရှည်လျားသောဓါးဖြစ်သနည်း။
အဆိုပါ Mina ဆံပင်ညှပ်များတွင် offset ergonomics၊ ချွန်ထက်သောပြားစွန်းသောဓါးများနှင့်၎င်းကိုလျှော့ချသည့်အခါရိုးရှင်းသောတင်းမာမှုညှိနှိုင်းမှုကိုပါဖော်ပြထားသည်။
❌ ၇ လက်မအရွယ်အစားသာရရှိနိုင်ပါသည်
7. Jaguar အကြိုစတိုင်အတ္ထုပ္ပတ္တိကတ်ကြေး
Jaguar သြစတြေးလျလူမျိုးများအတွက်ဂျာမနီ၌အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Ergo စီးရီးတွင်ချွန်ထက်သော bevel အစွန်းဓါး၊ ဖဲအချောနှင့်ကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီသောဒီဇိုင်းတို့ပါဝင်သည်။
Ergo မော်ဒယ်သည်အစပြုသူများအတွက်လူကြိုက်များသည်။ ၄ င်းသည် ၄ ​​င်း၏ဈေးနှုန်းချိုသာသောအိမ်နှင့်အစပြုသူဆံပင်ကတ်ကြေးကဲ့သို့ပင် ၄ င်း၏ ၀ င်ရိုးအဆင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးကဲ့သို့လူကြိုက်များသည်။
✔️ Bevel Edge Blade ကို
Jaguar Ergo ကတ်ကြေး
သင်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထိန်းသိမ်းထားပါကအစပြုသူတစ် ဦး ၏ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်တောက်သည်။
အနည်းငယ်သောဖြတ်တောက်မှုများအပြီးတွင်ဓါးသွားများ၊ ဆီနှင့်ဆံပင်များထူထဲလာခြင်းကိုပိုးမွှား။ ကာကွယ်နိုင်ရန်သင်၏ကတ်ကြေးများကိုသန့်ရှင်းနိုင်သည်။
သူတို့ကိုညှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအလုံအလောက်တင်းကျပ်နေတယ်၊ ​​သင်ဖြတ်တောက်ပြီးအားစိုက်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသိပ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မဖြစ်စေရဘူး။ ဒါကြောင့်အသံတွေထွက်လာတယ်။
အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ကတ်ကြေးကအဘယ်ကြောင့်ဒီလောက်စျေးကြီးပြီးစတင်သူအလုပ်သင်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ဟာဒေါ်လာ ၂၀၀ သာရသလဲ။
အိမ်တွင်အစပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများ၊ အလုပ်သင်များနှင့်ကျောင်းသားများသည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်ချွန်ထက်သောကွေး၊ ပြားပြားသို့မဟုတ်ခုံးအစိုင်ဓါးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အခြေခံသံမဏိများသာလိုအပ်သည်။
ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိကတ်ကြေးများအကြောင်းနောက်ထပ်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်။ နေ့စဉ်ဆံပင်ညှပ်သောပညာရှင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခံပြီးရေရှည်အတွက်တောက်ပနေမည့် pair တစုံလိုအပ်သည်။
နိဂုံး - အကောင်းဆုံးအစပြုသူဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များကဘာလဲ
အကောင်းဆုံးအစပြုသူဆံပင်ညှပ်များကို Japan Scissors တွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစပြုသူကိုရွေးချယ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ထို့ကြောင့်အရာများကိုရိုးရှင်းစွာထားရန်သတိရရန်အရေးကြီးသည်။
အကောင်းဆုံးအစပြုသူကတ်ကြေးများသည်အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မမှ ၆ လက်မအကြားရှိပြီး၎င်းတွင်လွယ်ကူသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်ချွန်ထက်သောပြားချပ်ချပ်၊
သင်သည်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ခြင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၉၉ မှ ၂၄၉ ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
သြစတေးလျအစဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး | ScissorHub တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ကန ဦး ကတ်ကြေးအရွယ်အစားကို USA စတင်သူလမ်းညွှန် | ဤနေရာတွင် Japan Scissors USA တွင်ဖတ်ပါ
အစပြုသူဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ Kamisori
Beginner ဘာဘာဂျပန်ကတ်ကြေးလမ်းညွှန် | ဘာဘာကတ်ကြေးသြစတြေးလျတွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
နယူးဇီလန်မှအစပြုသူဂျပန်ကတ်ကြေးများ HairScissors.co.nz တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ကနေဒါမှစတင်သူများအတွက်ကတ်ကြေးလမ်းညွှန် | ဤနေရာတွင် JapanScissorShop.com တွင်ဖတ်ပါ
ကပ်ရောဂါကြောင့်လူများစွာသည်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ဆံပင်ဖြတ်ရန်ပြန်သွားကြသည်ကိုငါသိသည်။ အပူတပြင်းအချိန်များသည်အပူတပြင်းလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုနေသောကြောင့်ဆံပင်ညှပ်၏အရည်အသွေးကိုငါမှတ်ချက်မပေးပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကကလေးတွေရဲ့ဆံပင်ကိုပုံမှန်ညှပ် (ဒါမှမဟုတ်ဆံပင်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးညှပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်) အစပြုတဲ့ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးအစုံကမကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာအရာတွေကိုရွေးချယ်ရလွယ်ကူစေပြီးကွဲပြားတဲ့အပိုင်းအခြားအားလုံးမှာစျေးနှုန်းတွေအမြဲရှိစေတဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။